जापानमा मौसम र वार्षिक मौसम! टोकियो, ओसाका, क्योटो, होक्काइडो आदि - Best of Japan
जब तपाइँ जापान भ्रमण गर्ने योजना गर्नुहुन्छ, मौसम र मौसम कस्तो रहनेछ? यस लेखमा म जापानको मौसम र मौसम र प्रत्येक क्षेत्रका सुविधाहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छु।
जापानको मौसम विविध छ
जाडो मौसम: जापान समुद्री किनारमा हिउँ
जापानको बरसात: जुन जुन
जाडोमा शरद theतु उत्तम मौसम हो
जापान el००० किलोमिटर उत्तर र दक्षिणमा विस्तारित एक विस्तारित द्वीपसमूह हो। यसमा large ठूला टापु र करीव ,,,०० साना टापुहरू छन्। मौसम उत्तरी होक्काइडो र दक्षिण ओकिनावा बीच धेरै भिन्न छ। होक्काइडोमा जाडो धेरै चिसो छ, जबकि ओकिनावा जाडोमा पनि तुलनात्मक रूपमा हल्का छ। जाडो याममा भारी हिउँ पर्ने क्षेत्रहरू होक्काइडोको जापान समुद्री किनार र उत्तरी होन्शुको जापान सागर पक्ष हो।
डाटा: जापान मौसम विज्ञान एजेन्सी
जापान मौसम विज्ञान एजेन्सी
जापानमा भारी हिमपात = शटरस्टक
द्वीपसमूहको ढाड जस्तै, पहाड श्रृंखलाहरू लामो दौडिरहेका छन्। यस हिमाली दायराको कारणले गर्दा, जापानी टापुको प्रशान्त क्षेत्र र जापानको समुद्री किनारको मौसम धेरै फरक छ। प्रत्येक जाडोमा, जापानको देशको छेउमा जापानको सागरबाट भिज्ने धेरै बादल पहाडहरूसँग टकरावमा आउँछन्। यहाँ प्रायः हिउँ पर्दछ। यसैबीच, प्रशान्त क्षेत्रमा, सफा मौसम जाडोमा जारी रहनेछ। यदि तपाइँ हिउँदमा हिमाल पर्वतमालाको पश्चिमी क्षेत्रहरूमा जानुहुन्छ, विशेष गरी होक्काइडो र उत्तरी होन्शु, तपाईं हिउँ पर्ने परिदृश्यहरू हेर्न सक्षम हुनुहुनेछ।
परम्परागत जापानी किमोनोकी एउटी आइमाई कामकुराको मिगेट्सिन मन्दिरमा सुन्दर नीलो हाइड्रेंजिया (म्याक्रोफिला) संग सजाइएको दृष्टिकोणमा हिंडदै एक वर्षा Sh शटरस्टकमा
त्यहाँ एक वर्षा seasonतु हो जुन "मध्ययु देखि जूनदेखि मध्य जुलाई" होक्काइडो अपवाद बाहेक मिल्छ। जापानको पश्चिमी भागको बीचमा एक वर्षा मोर्चा बसोबास गर्दछ। वर्षा उष्णकटिबंधीय आँधीबेहरी जस्तै भारी छैन। यस समयमा शान्त वर्षाको लामो अवधिको आशा गर्नुहोस्। यद्यपि हालसालै ग्लोबल वार्मिंगका कारण त्यहाँ धेरै पानीका साथ समय आएको छ।
यस अवधि देखि सेप्टेम्बर वरिपरि सम्म, जापानी द्वीपसमूह चिसो आर्द्रता मा सामान्य छ। गर्मीमा (विशेष गरी जुलाई र अगस्ट) दिनको अधिकतम तापमान प्राय: temperature० डिग्री सेल्सियस भन्दा बढी हुन्छ। होक्काइडो र नागानो प्रान्तको उच्च भूभाग क्षेत्रहरू तुलनात्मक रूपमा सुन्दर छन्, त्यसैले यी क्षेत्रहरू एक गर्मी रिसोर्टको रूपमा लोकप्रिय छन्।
अर्शियामा, क्योटो, जापान = शटरस्टकमा स्पष्ट नीलो आकाशको विरूद्ध रातो फोलि fहरू
जुलाईदेखि अक्टुबरको पहिलो आधासम्म, हिंसात्मक उष्णकटिबंधीय वर्षा तूफानहरू "टाइफुन" जापानी टापुमा आउँदछन्। जब आँधीले हिट गर्छ, भारी वर्षा हुन्छ। जब आंधीको मौसम समाप्त हुन्छ, सम्पूर्ण जापानी टापुहरू राम्ररी सफा हुनेछन्। यो अक्टोबरदेखि नोभेम्बर महिनामा सबैभन्दा सहज छ, त्यसैले यो जापान भ्रमण गर्न उत्तम मौसम हो। धेरै दर्शनीय स्थलहरू छुट्टिमा राम्रो मौसमको मजा लिने व्यक्तिहरूको भीडसँग हुन्छन्।
जापानी मौसम डेटाको लागि, कृपया जापान मौसम विज्ञान एजेन्सीको आधिकारिक वेबसाइटमा हेर्नुहोस्।